လင်္ကာ: ABSDF လူသတ်ပွဲဘယ်သူတရားခံလဲ အပိုင်း (၄)
ABSDF လူသတ်ပွဲဘယ်သူတရားခံလဲ အပိုင်း (၄)
ကျောင်းသားတပ်မှာအင်္ဂံလိပ်စကားပြောသင်တန်းဖွင့်တော့KIAထောက်လှမ်းရေးကအရာရှိဗိုလ်ဂွန် မော်(ယ္ခုဗိုလ်မှုးချုပ်ဂွန်မော်)နဲ.အတူအခြားတယောက်လဲပါလာတက်ပါတယ်။ ကျနော်အဖမ်းခံရတဲ့ညနေ မှာပဲဗိုလ်မှုးကြီးပန်းအောင်နဲ.ဗိုလ်ဂွန်မော်တို.ရောက်လာပြီးကျနော်ကို-KIAဘက်ခေါ်သွား
ပြီးကျနော့်ကို KIAပြောင်း ဖို.ခေါ်ပါတယ်။ကျနော်ကကျန်တဲ့အားလုံးထောက်လှမ်းရေးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျနော့် အသက်နဲ.ရင်းပြီးအာမခံတယ်။အားလုံးကိုခေါ်ပေးပါ။ဖြေရှင်းပေးပါလို. ဆိုတော့ အဲဒီ DABမူကြီးကြောင့်မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျနော်ထောင်ထဲထိပ်တုံးနဲ.နေစဉ်ဗိုလ်ဂွန်မော်နောက်
ထပ်ရောက် လာပြီးထပ်ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကထိပ်တုံးထဲကကျနော်ဘေးမှာစိုးမိုးလဲရှိ ပါတယ်။ အဲဒီမှာလဲကျနော်က အားလုံးကိုခေါ်ပေးဖို.ပြောတော့အဲဒီ DAB မူကြီးကြောင့်ပဲ ဘာမှရှေ.မဆက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။
ချည်တဲ့သံကြိုးအပင်၅၀ကို တရုပ်ပြည် ကပန်းပဲဖိုမှာသွားမှာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျားလေးကပဲ ၁၅ ခုတ်တဲ့အချိန်မှာကွန်မန်ဒိုတပ်စိတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ပါခဲ့တာပါ။မခင်ချိုဦး ကိုမသတ်ခင် မတော် မတရား လုပ်ခဲ့ တာကျားလေးနဲ.အဖွဲ.ပါ။အခု ကျားလေးက မန္တလေးစက်မှုမြို.သစ် မှာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့် ထားပြီး အခြေချနေပါတယ်။သန်းဇော် ကမန္တလေး သင်ပန်း ကုန်းမြို. သစ် မှာနေ ပါတယ်။ ဒါတွေကိုသိတဲ့လူတွေက ထပ်ဖော် ထုတ်ပေးကြ ပါ......
အဲဒီနောက်မှာဗိုလ်မှုးကြီးပန်းအောင်ကဦးစီးပြီးKIAတပ်ကလက်နက်တွေအခိုးခံရလို.ဆိုပြီးသေနက်နံ ပတ်တွေ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို.အတွက် ကျောင်းသားတပ်ထဲကသေနတ် တွေကို ၃ လက်ချင်း ၅ လက်ချင်းလိုက် သီမ်းတော့အလားတူပြသ၁ နာတက်ပါ တယ်။(ဘယ်သူတွေမှန်းမသိသူတွေ က အဲဒီတုန်းကအတွင်းရေးမှုး -ယ္ခု ဥက္ကဌ ဦးဇောင်းခရားကိုဝင်ရောက် ပြောဆိုပြီးDAB မူနဲ. ခြီမ်းခြောက်ခဲ့လို.လက် နက်တွေပြန်ပေး လိုက် ရပါတယ်။
နောက်ဆုံး ၅၅ ယောက် ထွက်ပြေး တုန်းက ဦးဆောင်ပြေးခဲ့တဲ့ ကိုမြင့်သိန်းနဲ.ကိုသန်.ဇင်မိုးတို.နှစ်ဦးဟာ KIA လိုင်စင်ဂိတ်အနီးမှာ “ကျနော်တို.ဟာထောက်လှမ်းရေးတွေမဟုတ်ပါဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး KIA အနေ န.ဲကျနော်တို.ကိုလိုက်မဖမ်း ပါနဲ.လွတ်မြောက်ဖို.အကူအညီပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။” ဆိုတဲ့ စာတွေတော်တော်များများ ကို ထောင်ထားကပ်ထားခဲ့ကြပါတယ်။သူတို. ၅၅ ဦးထွက်ပြေးချိန်မှာ ၅၅ ဦးစလုံး KIA ရွာဖြစ်တဲ့ ရှားဟော့ပါ ရွာရဲ.ရွာလည်လမ်းမပေါ်ကနေသံကြိုးသံ တချွင်ချွင်နဲ.ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ရွာတန်းရှည်ကြီး က ၂ မိုင်လောက်ရှည်ပါတယ်။ကျောင်းသားတပ်ကနောက်ကလိုက်ဖမ်းတော့ လိုက်မဖမ်း နိုင်အောင် KIA ကနယ်စပ်ဂိတ်ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်။မနက်ကတည်းကထွက်ပြေးသူတွေကိုလိုက်ဖမ်းနေ တဲ့ အောင်ကြီးနဲ.အဖွဲ.ကို KIA ရဲ.အဆက်အသွယ်နဲ.ဆမားမှာရှိတဲ့ တရုပ်ရဲကဖမ်းထားလိုက်ပြီးညနေ စောင်း မှ ဖမ်းထားတဲ့သူတွေကိုကျောင်းသားတပ်ကိုပြန်ပို.လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီကနေတဆင့် တရုပ်ရဲ က ကျောင်း သားတွေထပ်မထွက်ဖို.ဟန်.တားခဲ့ပါတယ်။တော်တော်ဝေးဝေး ကိုရောက်နေတဲ့ ထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ ၅၅ ယောက် အဖွဲ.ကိုတရုပ်ရဲကဖမ်းဆီးပြီး ဘာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှမလုပ်ပဲ အစိုးရတပ်စခန်းရှိရာကိုပို.ပေးနိုင်ဖို.အတွက် KIA ကစီစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီကိစ္စမှာ KIA ဟာ ကူညီသူအဖြစ်သာပါခဲ့ပြီး အပြစ်ရှိသူတွေဟာ ABSDF အတွင်းနဲ.သူတို.နဲ.နီးစပ်တဲ့ဒေသခံတွေသာဖြစ် တယ်ဆိုတာရှင်းပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကိုပြောနေ ရတာဟာ ယုန်ထင်ကြောင် ထင်ဖြစ်နေရင်အဓိကတရားခံ တွေလွတ်သွားမှာစိုးလို.ပါ။ပထမဆုံးစဖမ်းပြီး တပတ်အကြာ မှာတင် အောင်စိုး(ကျားလေး)ဟာမျိုးဝင်းအမိန်.နဲ.အကျဉ်းသားတွေကိုချည်တဲ့သံကြိုးအပင်၅၀ကို တရုပ်ပြည် ကပန်းပဲဖိုမှာသွားမှာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျားလေးကပဲ ၁၅ ခုတ်တဲ့အချိန်မှာကွန်မန်ဒိုတပ်စိတ်ရဲ.ခေါင်းဆောင် အဖြစ်ပါခဲ့တာပါ။မခင်ချိုဦး ကိုမသတ်ခင်မတော်မတရားလုပ်ခဲ့ တာကျားလေးနဲ.အဖွဲ.ပါ။အခု ကျားလေးက မန္တလေးစက်မှုမြို.သစ် မှာလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ဖွင့် ထားပြီးအခြေချနေပါတယ်။သန်းဇော်ကမန္တလေး သင်ပန်း ကုန်းမြို.သစ်မှာနေပါတယ်။ဒါတွေကိုသိတဲ့လူတွေကဒီထပ်ဖော်ထုတ်ပေးကြပါ။ကျော်ခိုင်ဝင်းနဲ.ပက်သက် လို. ဆိုရင် လဲသူသိထားတာတွေထဲမှာမပြောပဲချန်ထားတာတွေရှိနေပါတယ်။မျိုးဝင်းကုန်းပေါ်က အစောပိုင်းရက် ရက် စက်စက်နှိက်စက်မေးမြန်းမှုတွေမှာ မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ကျော်ခိုင်ဝင်းရှိပါတယ်။အောင်ဖိုးရဲ. ခြေထောက်ကို ကပ်ချည်ပြီး ခွဲတဲ့အချိန်မှာကိုကျော်ခိုင်ဝင်းဘာလုပ်ခဲ့သလဲ?ကိုယ့်ကိုယ့်ကို သိပါတယ်။ ခင်ဗျာတို.ပြောစကားကိုပြန်သုံးရရင် “ဖြူစင်ပါ ကောင်းကောင်းလုပ်ပေါ. “ သူများပြောမှ ခွင့်မလွတ်ချင် စရာဖြစ်လာမှဆိုရင်အကုန်ပေါ်ကုန်ပါလီမ့်မယ်။ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဖော်ပေးပါ။နောက်ဆေးဆရာမတွေ အလောင်းခွဲပြီး ဌက်ဖျားနဲ.သေတာတို.၊အချင်းချင်းနှုတ်ပိတ်လိုက်တာတို.ဆိုတဲ့စကားတွေကိုမြိန်ရေ ရှက်ရေ ပြောခဲ့ကြသူတွေ၊အဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသမိးတွေရဲ.မတော်ရာကို ဒီတိုနေတာ ဖွတ်ထားလားဆိုပြီး ရှာခဲ့ တဲ့သူတွေ(ဆေးကုတာတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲဒါသီးခြားကိစ္စပါ)မသိနားမလည်လို. ခိုင်းလို. လုပ်ရတယ်ဆိုရင်သိသမျှဖော်ပေးပါ။မဖော်ရင်ပူးတွဲတရားခံတွေဖြစ်ကုန်ပါမယ်။ဖေါ်တယ်ဆိုရာမှာ ဥပမာ- စုဆောင်းရေး မှာပါလာတဲ့သင်တန်းသူ သန္တာဦး ကိုယ်ဝန်ဖြတ်ချပြီးသေတာမျိုး၊ဘယ်သူက ကိုယ်ဝန်ဖြတ် ချခိုင်းတာလဲ? ကိုယ်ဝန်တရားခံကဘယ်သူလဲ? ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါမကျန်စေပါနဲ.။အဲဒီ တုန်းကသင်တန်း မှာသင်တန်းဆရာ ရွှေမင်တို.ကြီးစိုးနေချိန်ပါ။